AHOANA NY FANAVAOZANA NY INTERNET EXPLORER - INTERNET EXPLORER - 2019
Internet Explorer. Manavao sy manamboatra navigateur
Ny olana matetika amin'ny fampidinana sy ny fandidiana ny Internet Explorer (IE) dia mety hanondro fa fotoana izao hamerenana na hamerenana ny tranokala. Mety toa sarotra be sy sarotra tokoa izany, nefa raha ny marina, na dia mpampiasa PC vaovao aza dia afaka mamerina mamorona Internet Explorer na manamboatra azy io mihitsy aza. Andeha hojerentsika ny fihetsik'ireo hetsika ireo.
Hamafa ny Internet Explorer
Ny famerenana ny IE dia fomban'ny famerenana ny famolavolan'ny tranokala ho an'ny fanjakana tany am-boalohany. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manatanteraka hetsika toy izany ianao.
Sokafy Internet Explorer 11
Ao amin'ny zoro-havanana amin'ny havanana, tsindrio ny sary fanompoana amin'ny endriky ny fitaovana (na ny fitambaran-kitendry Alt + X), ary mifidiana Ny tranon'ny navigateur
Ao amin'ny varavarankely Ny tranon'ny navigateur alefaso fiarovana
Farany, tsindrio Reset ...
Jereo ny boaty eo akaikin'ilay singa Esory ny solon'olona manokana ary hanamafy ny famerenana amin'ny tsindrio reset
Dia kitiho ilay bokotra akaiky
Aorian'ny rafitra fialana aina dia atsangano ny solosaina
Manamboara Internet Explorer
Rehefa namerina ny vokatra irinao ny famerenana ny navigateur dia mila averinao averina indray.
Ilaina ny manamarika fa ny Internet Explorer dia singa natsangana amin'ny Windows. Noho izany, tsy azo esorina fotsiny izany, toy ny fampiharana hafa ao amin'ny solosaina, ary manavao indray
Raha efa nametraka ny Internet Explorer 11 ianao dia araho ireto dingana ireto.
Tsindrio ilay bokotra fanombohana ary mankanesa any Control panel
Hisafidy singa Programa sy singa ary tsindrio ity
Avy eo tsindrio Ampiharo na manafoana ireo singa Windows
Ao amin'ny varavarankely Windows components Tsindrio ilay boaty eo akaikin'ny Internet Explorer 11 ary manamarina fa kilemaina ilay kilalao.
Atsaharo ny ordinatera hamonjy ny fanovana
Ireo hetsika ireo dia hanafoana ny Internet Explorer ary manaisotra ny rakitra sy ny fikirakirana rehetra mifandraika amin'ity tranonkala ity amin'ny PC.
Hiditra indray Windows components
Jereo ny boaty eo akaikin'ny Internet Explorer 11
Miandrasa ny rafitra hanavao ny rafitra Windows ary hamerina indray ny PC.
Taorian'ireny hetsika ireny, ny rafitra dia hamorona ny rakitra rehetra ilaina amin'ny navigateur amin'ny fomba vaovao.
Raha toa ka efa nisy andian-dahatsoratra taloha teo aloha (ohatra, Internet Explorer 10), alohan'ny hanesorana ny singa ao amin'ny tranonkalan'ny Microsoft ofisialy, dia mila mandefa ny dikan-teny farany indrindra amin'ny browser ianao ary mamonjy azy. Aorian'izany, azonao atao ny manala ilay singa, manomboha indray ny PC ary manomboha ny fametrahana ny fonosam-pidirana napetraka (tsindrio dika roa fotsiny ao amin'ny rakitra maimaim-poana, tsindrio ny bokotra Start ary araho ny mpampiasa Internet Explorer Setup Wizard).